Olana amin'ny fametrahana ESET NOD32 amin'ny Ubuntu 11.04 mandroso | Avy amin'ny Linux
ch3gt | | GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Tranga vitsivitsy no hitako, saingy misy mpampiasa sasany manana olana amin'ny fametrahana azy ESET NOD 32 amin'ny kinova sasany an'ny Ubuntu 11.04 mandroso
Ny lesoka iraisana omeny dia "Azafady apetraka ireto rakitra na fonosana ireto: /usr/lib/gconv/UTF-16.so"
Mba hamahana ity "olana" ity dia mila mamorona rohy avy amin'ny lahatahiry ianao "/ Usr / lib / gconv" manondro "/Usr/lib/gconv/UTF-16.so" satria ao amin'ny kinova farany an'ny Ubuntu tsy misy. Mandeha amin'ny terminal izahay ary mametraka:
Manantena aho fa hanampy anao izany ary tadidio fa tsara kokoa ny ampitandremana mialoha ny hanenenana any aoriana!
Miarahaba antsika rehetra, ity no lahatsoratro voalohany, manantena aho fa hanome alalana azy 😉 hahaha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Olana amin'ny fametrahana ESET NOD32 amin'ny Ubuntu 11.04 mandroso
Fa tsy adala aho! Vao hitako fa misy kinova Nod32 ho an'ny Linux.
Raha fintinina dia misy zava-baovao fantatra foana.
Ao amin'ny rafitra Linux desktop, ny antivirus (izay miasa toy ny amin'ny Windows) dia tokony hampiana amin'ny fampiasana marina ny rafitra.
Fantatro fa tsara fa misy ny safidy, fa ny tena marina dia tsy avy nampiasa rindranasa tompony aho izay mifehy ny zavatra rehetra ataoko ary mitranga eo amin'ny rafitro tsy tapaka.
Atahorana ny tsy fahalalana: toa any amin'ny GNU / Linux dia sarotra be ny mamindra amin'ny virus, sa tsy izany? Fa maninona no ilaina izany vokatra izany?
Ry mpiara-miasa, tsy fantatro ianao tamin'ny Troll xDDD .. Andao hojerentsika, ny zava-misy fa ny GNU / Linux manana vintana kely kokoa voan'ny virus, dia tsy midika izany fa afaka amin'izy ireo ... Inona no ratsy amin'ny fiarovana fanampiny?
Ho fanampin'izay, misy ireo pendrive voatahy izay entinay avy amin'ny masinina mankany amin'ny masininina, ary raha toa ka nisintona .exe tany ianao ary nandefa izany tany amin'ny masinina Windows, dia mety hitera-doza ianao.
raha ny varavarankely ihany no tratran'ny .exe tsy misy olana
Mila mitandrina kokoa ianao indrindra rehefa misintona rakitra ianao ary mametraka ".exe" ary fantatrao fa misy fanitarana hafa heveriko fa, ary rehefa mitranga amiko izany dia hoy aho hoe: "virus virus !!!"
ch3gt dia hoy izy:
Namana marina, ary ny zavatra tokony ho fantatra koa ireo depiote izay miasa ho toy ny tahiry malware na mitondra malware amin'ny fanafihana. Ankoatr'izay, mitombo isan'andro ny malware amin'ny Linux.
Valiny amin'ny ch3gt
Lol Izany no antony nanombohako tamin'ny: "atahorana ho tsy mahalala." Tao amin'ity bilaogy ity ihany dia namaky lahatsoratra iray tena mahaliana aho momba ny fomba fiasan'ny rafitry ny rakitra, ny fitadidiana virtoaly, sns. Amin'ny GNU / Linux / Unix / na inona na inona ary ahoana no nahatonga ny fihanaky ny kaody maloto saika tsy azo tanterahina, izany no nahagaga ahy fatratra, Heveriko fa mahazo alalana aho, sa tsy izany? 😉
Tsy fiarovana fanampiny, mametraka fampiharana tompony ianao ... tsy fantatrao izay apetrakao
Amin'ny ankapobeny dia zavatra izay tsy liana amin'ny mpampiasa mahazatra. Izany, amiko, aminao, angamba raha miahiahy momba ireo zavatra ireo isika (izany no tsy ampiasako ny Nod32, na NeroLinux, na zavatra mitovy amin'izany) ..
xD tsara, fa tsy miresaka momba izay tian'ny "mpampiasa mahazatra" izahay, ny filaminana kosa no resahina
Io dia ny mpampiasa sy ny filaminana ara-dalàna dia tsy dia be loatra ka aleo lazaina hoe xDDD
Hahahaha, antivirus ho an'ny Unix, hahahahahahahahaha.
Inona ny manaraka!!?
Antivirus ho an'ny Linux? Hummmm karazana mifanipaka izany ... Mety ho voan'ny virus ny milina iray, mazava ho azy, miankina amin'ny tranokala vangianao daholo izany; Fa raha matoky ny distro isika ary tsy mijery ireo pejy ireo dia heveriko fa tsy ilaina izany, farafaharatsiny rehefa tsy maintsy ampiasaiko ho an'ireo programa izay mbola tsy hitako ny solony ao amin'ny W $, mbola tsy sendra nahatratra izany mihitsy. izany ary amin'ny alàlan'ny mailaka ihany koa dia tsy mahalala olom-pantatra sy fifamatorana fotsiny aho, ary mitandrina hatrany. Fa hey ... misy ny zava-drehetra toy ny amin'ny fivarotam-panafody.
Indraindray tsy tadidiko ny fiasan'ilay antivirus any aoriana. Mbola tadidiko ny nanovan'izy ireo ny pejy fandraisako na nanampy bara hafahafa tao anaty tranokala. Nahita ahy ny zava-drehetra ny Spybot fa tsy nahita zavatra matotra mihitsy aho, fotoana mahafinaritra.
Hahahaha, azoko tsara izay lazainao .. tokony antsointsika hoe Windowsitis izany hahaha
Efa ho 4 taona tao amin'ny Linux fa tsy misy malware na iray aza hita eo, eny efa napetrakao ny antivirus.
Na dia nanampy ahy hahita izany aza fa misy Nod (aleoko Avast) ho an'ny Linux.
fanononana dia hoy izy:
Ny zava-misy fa tsy voaro amin'ny virus mahazatra 'mahazatra' i Linux dia marina. Ary marina ihany koa fa, tahaka ny tsy mahatafiditra azy ireo dia tsy miatrika ny fanafoanana azy ireo koa izany. Izay no olana, araka ny nolazainao, raha mandefa mailaka amina olona hafa ianao, na raha manana, amin'ny solosainao manokana, ny fikandrana (ao anaty booty roa), ary mamindra rakitra ianao avy amin'ny fizara iray mankany amin'ny iray hafa. Tsotra ny valiny: avelao i Windows hikarakara azy, izay ny olanao. Ny zava-mitranga dia indraindray ianao manana ny olana (nanjo ahy indray mandeha, ary nanomboka teo dia nesoriko ny Windows)
Ary fanontaniana iray: ankehitriny toa misy programa antivirus 'varotra' maromaro te hiditra amin'ny Linux ... hiasa ve izy ireo amin'ny maha 'mponina' azy ireo? Toa ahy fa, noho ny famolavolana peratra Linux, dia tokony tsy ho afaka hiasa toy izao izy ireo ary, hampiasa antivirus 'on demand' ... efa ananantsika ny clamav, sa tsy izany?
Mamaly an'i doc
Linux dia azo antoka fa voaro amin'ny viriosy mahazatra sy olon-tsy fantatra. Ny tsy azony, dia i Malwares, satria biby maro karazana bibikely manana tanjona samihafa izy ireo ary ampahany kely ihany amin'izy ireo ny viriosy:
Raha manome alàlana amin'ny olona azo tratran'ny aretina na izay kaody loharano nanjary taharo ho programa tsy manan-tsiny isika, dia ny trojan dia handeha tsara toy ny varavarana aoriana.
Raha mampiasa rindrambaiko tsy mitandrina toa ny Adobe Flash, Java sns isika, na dia tsy dia manana risika hisamborana viriosy aza isika dia hampiharihary fatratra ireo masinina hahazo fanafihana avy amin'ny virus isika. kankana.
Raha tsy manavao ny browser-ntsika isika, na koa manavao azy io ary miditra amin'ireo tranonkala mampiahiahy isika, dia mety ho tratry ny a mitrandraka izay mampiasa fahalemena tsy fantatra.
Raha mametraka am-pitandremana add-ons amin'ny mpizahatany isika, na dia tsy manana tombony ambony aza izy ireo dia afaka miasa soa aman-tsara izy ireo spyware, vao mainka aza raha manome alalana azy ireo hanavao ho azy isika.
Raha tsy amboarintsika tsara ny serivera na serivisy lavitra dia hahazo fangatahana tsy ilaina isika ary fanafihana mahery setra efa imbetsaka nataon'ny script mba hanamorana ny fisamborana masinina ary hanatevin-daharana azy ireo amin'ny botnet.
Raha misy miditra an-tsokosoko ao amin'ny rafitra ary mamela antsika ny fanomezana, ny rootkit hiasa toy ny fizotra miafina izy io, manimba ny rafitra, manafotra serivisy hafa ary manompo ny mpitsidika matetika rehefa tiana toa mpampiasa marina.
Imbetsaka aho no nanandrana nametraka Avast! ho an'ny linux, saingy tsy mandeha mihitsy - manome hafatra diso aho.
Mampatahotra ny mamaky ny sasany amin'ireo hevitrao rehefa manondro na tsy miraharaha ny fiarovana azy amin'ny sehatra samihafa, ny zava-dehibe eto dia ny fahafantarana fa ny loza mety hitranga amin'ny malware ao amin'ny linux uuuuuu Andriamanitra be loatra, kaody maloto multiplatform ...... Tsy lazaina intsony, ny fahalemen'ny Adobe, Java ... ………. ao amin'ny linux ve izany ???? Mazava ho azy!!! alaivo an-tsaina hoe ahoana ny fitomboany tamin'izany, ankehitriny, mbola manahy ihany aho …… Mazava ho azy !!!
Tsy tokony ho pessimistic izy io, fa indray andro any dia hianjera toa ny OS X isika, tsy noho ny rafitra na satria tsy tena tonga ny fanavaozana, fa noho ny tsy fitahian'ireo mpampiasa sy ny tsy fahafantaran'izy ireo momba ny evolisiona sy sophistication ny malware. Misy zavatra milaza amiko fa hahatratra antsika matory izy ireo.
Marina tokoa namana, maro no tsy mahalala ny loza mety hitranga ankehitriny. Manoro hevitra aho, raha sarobidy ho an'ilay olona ny fampahalalana voatahiry ao amin'ny fitaovana X, inona no tokony harovana. (ny teny hoe fiarovana dia tsy mihatra amin'ny AV ihany)
Heveriko fa ny ClamAV dia mihoatra noho ny ampy (miaraka amin'ny fahatsapana mahazatra), indrindra mba hiarovana ireo namantsika Windows.
Andriamanitra ô ...
Andao hojerentsika, inona izao no mampatahotra ahy? Miaro anao ve io antivirus io sa ny mamakafaka fotsiny? Ny fepetra tokana ataoko dia ny mamakafaka indraindray amin'ny CLAM ary ny marina dia tsy nisy na inona na inona nivoaka na tsy nanana olana momba ny virus aho. Saingy nino aho fa ho an'ny Linux dia tsy misy antivirus hiarovana amin'izany fotoana izany.
Ry namako, ny tianao holazaina dia ny antivirus miaraka amina fiarovana tena izy, ary ny valin'ny fanontanianao dia eny. ESET ho an'ny GNU / Linux dia manolotra fiarovana amin'ny fotoana tena izy, tsy manolotra azy ny ClamAV, fa afaka manamboatra script izay "maka tahaka" azy ianao, izany no ataoko, ary manana script koa aho hanavao ny DB isan'ora.
Ao amin'ny Windows raha afaka mampiasa ClamAV ianao miaraka amina fiarovana tena izy amin'ny alàlan'ny fametrahana ClamWin + ClamSentinel:
Ho an'ireo izay te hampiasa ESET amin'ny GNU / Linux (tsy tiako) dia tokony hataon'izy ireo http://tienda.eset.es/ Tsy mampino ny fahalianan'ny ESET amin'ity OS ity ary misy ny kinova Desktop, Business ary Server.
Azoko tsara fa na ity antivirus ity na ny dikan-tsoratry ny avast, ny viriosy dia avy amin'ny windows ary io fiarovana io dia manome an'i linux ny hany tokana dia ny manadio fahatsiarovana USB na kapila USB fa izany no clam?
Eny, ny antivirus ara-barotra ho an'ny Linux dia efa elaela izay; amin'ny andro ny virus (malware) iray dia mamokatra aretina mitovitovy amin'ireo izay mitranga ao amin'ny winchot, ho hitantsika izany, aza manahy, ho be ny tabataba. Ireto antivirus ireto dia ilaina hiarovana ny rafitr'i Bill tsy misy zavatra hafa. Tsy maintsy jerentsika izay entin'ny fahatongavan'i Steam, ho hitantsika.
Misy antivirus tena izy ve? Ny tiako holazaina dia misy loharano malalaka na misokatra ho an'ny Gnu / linux?
Loharano misokatra manana ClamAV ianao fa misy viriosy tena izy ho an'ny GNU / Linux?
1Qalkiera dia hoy izy:
Tafandria mandry. Izaho dia mpampiasa Linux nandritra ny roa taona, ary na dia marina aza fa ny fanovana ny mpitantana ny birao dia tonga hatramin'ny orona aho, ny marina dia faly aho.
Ho anao izay tena miahiahy momba ny virus sy mampiasa Firefox dia lazao azy ireo fa manana fanampim-panazavana antsoina hoe "Fireclam" ianao, ary raha nametraka clamav ianao dia mamakafaka izay rehetra alainao (farafaharatsiny miaraka amin'ny fampidinana mivantana).
Mikasika ny malware, heveriko fa mahatadidy lahatsoratra iray avy amin'ny mpamorona Debian iray aho, izay nanontaniana momba ny fampiharana mety hiaro amin'ny Trojans amin'ny fotoana tena izy, dia namaly zavatra toy izany fa zavatra tsy tao an-tsain'ny mpamorona Debian (dikantenin'i Google ).
PS Miarahaba anao amin'ny pejy ary… Miarahaba anao KZKG ^ Gaara !!!
Valio amin'i 1Qalkiera
Tahaka ny fampiasako ny GNU / Linux _tsy mampiasa_ antivirus. : facepalm:
Ny olana eto dia ny fandriam-pahalemana, izany no antony maha-zava-dehibe ny fananana vahaolana fiarovana amin'ny solo-sainanao, ny malware ao amin'ny Linux dia mitombo hatrany hatrany, raha tsy hitanao ny rootkit sarotra izay nivoaka ho an'ny Linux, mampatahotra ny mieritreritra fa misy ny mpampiasa Tsy fantatr'izy ireo ny loza mety hitranga, fa zava-dehibe ny manonona azy, Cheers! (b)